Shina: Niakatra ny harin-karena, ary ny fandaniambola? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2010 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, বাংলা, 日本語, Español, English
Nivoaka ankehitriny ny filazana fa ny toe-karen'i Sina dia efa manakaiky ny laharana faharoa maneran-tany, niaraka tamin'izany ny fampiharihariana ny fiakaran'ny tarehimariky ny firenena Japoney tao anatin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2010.
Mankaiza daholo ary ny vola rehetra? Hoy i BRY, mpikambana iray ao amin'ny vohikala fifaneraserana ara-toe-karena, tao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny herinandro lasa teo nitondra ny lohateny hoe: “Maninona ary no manao tahiry betsaka toy izao foana ny Sinoa?”, ka ny nanombohany azy dia ny fanoharana ny rafitra eo amin'ny fitandrovana ny fahasalaman’ i Australia, Suède ary Thailand amin'ny an'i Sina:
Tany Sina, nanamaivana ny olana teo amin'ny saram-pizaham-pahasalamana ny fametrahana ny rafi-piahiana ara-pahasalamana, raha tsy hoe miady amin'ny aretina lehibe mandritry ny andro iainanao ianao ka miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny fianakavianao na koa dibo-trosa, indrindra moa raha tsy manana mpiahy ianao.
Nampitaha ny saram-pianarana eny amin'ny ambaratonga faharoa any amin'ny firenena toy ny UK, Frantsa ary Inde:
Any Sina, nitombo avo 25 heny amin'ny sarany tamin'ny taona lasa ny saram-pisoratana anarana hidirana eny amin'ny anjerimanontolo, nefa tamin'io fotoana io ihany, nitombo avo efatra heny fotsiny ny salanisan'ny fidiram-bolan'ny mponina any an-drenivohitra sy any ambanivohitra, midika izany fa niakatra haingana dia haingana avo 10 heny ny saram-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo raha oharina amin'ny fidiram-bolan'ny mponina. Mba ahazoana ny diplaoma mifanaraka amin'ny fianarana mandritry ny efa-taona izany, dia tsy maintsy mandany 28,000 RMB farahakeliny ny mpianatra iray, izay mitovy amin'ny fidiram-bolan'ny mpamboly sy mpiompy iray efa nanalàna ny pitsopitsony rehetra mandritry ny roapolo taona any amin'ny faritra faran'izay mahantra. Mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ny vidin-tsakafo sy ny akanjo fitafy na koa ny saram-pitandrovana ny fahasalamana.
Notohizany tamin'ny firesahana ny fiainan'ireo be antitra mpisotro ronono any Sina sy any amin'ny toeran-kafa izany:
Ny firenena sosialista izay manana toe-karena tsara tantana tahaka an'i Mongolie, Korea avaratra ary Kioba dia nametraka rafitra mikasika ny fisotroan-dronono izay mifototra amin'ny fiahiana nasionaly, niainga tamin'ny rafi-piahiana ara-tsosialy ka natao ho rafi-piahiana nasionaly tamin'ny alalan'ny lalàm-panorenan'ny firenena tsirairay avy; iantohan'ny fanjakàna avokoa ny saran'ny fisotroan-dronono rehetra, ka tsy mandoa na inona na inona ny tsirairay. Amin'izao fotoana izao, any Sina, manaraka modely eo amin'ny rafi-piahiana nasionaly mikasika ireo be antitra mpisotro ronono ireo mpampiasa amin'ny fanjakana, ary manaraka modely eo amin'ny rafi-piahiana ireo be antitra mpisotro ronono ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana ka amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana azy ireo no anaovany izany. Ny mpamboly sy mpiompy ary ireo olona tsy an'asa monina an-drenivohitra sy any ambanivohitra (tafiditra ao anatin'izany koa ireo tsy manana asa raikitra), izay mameno ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena, dia tsy manana mpiahy ka tsy maintsy mamoaka 20% amin'ny fidiram-bolany manokana andoavany ny latsakemboka.
Raha mbola tsy ampy entina hanazavana ny antony itiavan'i Sinoa manao tahiry betsaka ireo zavatra voalaza miisa telo ireo, dia ampidiro ao koa ny trano fonenana. Lafo dia lafo ny vidiny ankehitriny hany ka tsy maintsy manao safidy ny fianakaviana iray manana fidiram-bola amin'ny antonony ny amin'ny hoe: handany mihoatra ny antsasaky ny tahiriny ve izy ireo sa hanefa ny hofany mandritra ny androm-piainany rehetra?
Ny antony hanaovan'ny Sinoa tahiry betsaka dia satria ny vola tehiriziny androany dia laniny amin'ny fandaniana rehetra ny ampitso. Raha mitahiry vola ny Sinoa dia satria mianto-tena izy ireo ary indrindra koa miezaka izy ireo mba hamela tahiry kely ho an'ireo zanany. Koa satria moa tsy ampy ny rafi-piahiana misy ankehitriny, ny hany vahaolana hitan'ny Sinoa dia ny miady irery mba ahafahany mampiadana ny fianakaviany sy ny taranany aoriana ary koa mba hiainan'izy ireo ao anatin'ny fahampiana hatrany.
Lahatsoratra tsara ho vakiana: miandry fivoarana ny banky.
(Ny sary hita ato amin'nity lahatsoratra ity dia nindramina tao amin'ny ity ny sarin'ny vola 100 RMB nalaina tao amin'ny Flickr, anaran'ny mpampiasa azy Comer Zhao)